Kuzu No Honkai मा आदर्श एनिम जोडी - पालना दृश्य
के हनाबी र मुगी आदर्श एनिम जोडी हुन्?
एनिम गहिरो कुजु नो होन्काइ
by Dima 24th नोभेम्बर 2021 12th जनवरी 2022
एक टिप्पणी छोड Kuzu No Honkai मा आदर्श एनिम जोडी मा
त्यहाँ धेरै आदर्श जोडीहरू छन् एनिमे, र ती मध्ये केही वास्तवमै धेरै भन्दा धेरै बाहिर खडा छन्। Anime मा एक आदर्श जोडी को एक साँच्चै राम्रो उदाहरण हुन सक्छ हानबी र मुगी बाट कुजु नो होन्काइ। नाटकीय रोमान्स एनिमे जुन 2017 मा स्कम्स विश टिभी शृंखलाको रूपमा बाहिर आयो एनिमे दर्शकहरूबाट विभाजित प्रतिक्रिया थियो।
तपाईं तलको एङ्कर मार्फत यो पोस्ट सुन्न सक्नुहुन्छ:
तल स्कम्स इच्छामा द आइडियल एनिमे जोडी पढ्न जारी राख्नुहोस्। छलफल गर्छौं मुगी र हानबीको सम्बन्ध, तिनीहरूका पात्रहरू, तिनीहरू अन्तमा सँगै नभेट्नुको कारण र अरू धेरै।
हानाबी र मुगी सँगै ओछ्यानमा
धेरै आलोचकहरूले एनिमलाई मन पराउँदैनन् कि अन्त्य मात्र अनिर्णित तर असंतोषजनक थियो। अर्कोतर्फ, धेरै प्रशंसकहरू कुजु नो होन्काई मंगा र एनिमे यो एक धेरै राम्रो अन्त थियो किनभने यसले अपरिपक्व प्रेमको दुःख र कच्चा वास्तविकतालाई जोड दिएको छ। यस लेखमा हामी बीचको सम्बन्धमा जानेछौं मुगी र हानबी, र किन एनिमका धेरै प्रेमीहरूले तिनीहरूलाई आदर्श एनिम जोडीको रूपमा देखे।
सिंहावलोकन - कुजु नो होन्काईमा आदर्श एनिमे जोडी
यद्यपि मा एनिमे तिनीहरू सँगै समाप्त भएनन् र दुःखको रूपमा तिनीहरूले सुरु गरेको रोमान्टिक सम्बन्ध बन्द गर्ने निर्णय गरे, तिनीहरू अझै पनि प्रशंसकहरूद्वारा सबैभन्दा मनपर्ने जोडीहरू मध्ये एक थिए। एनिमे, जसरी सबैले सोचेका थिए कि तिनीहरू साँच्चै एक अर्काको लागि बनेका थिए। वास्तवमा, यो वास्तविक जीवनमा मात्र होइन जहाँ मानिसहरू सोच्छन् कि तिनीहरू राम्रो जोडी थिए। मा पछिल्ला एपिसोडहरू मध्ये एकमा, हनाबीका साथीहरूका एक जोडीले त्यसो भने हानबी र मुगी एक सिद्ध जोडी थियो। यो किनभने स्कूलमा मानिसहरूले उनीहरूलाई स्कूलमा देखिरहेका छन्, उनीहरूलाई सँगै हेर्ने, चुम्बन गर्ने, हात समात्ने र अन्य सबै प्रकारका चीजहरू।
Kuzu No Honkai को सुरुवात
को सुरूमा एनिमे जहाँ मुगी र हानबी भेटौं भने उनीहरु यौन सम्बन्धमा रहेको देखिन्छ । यो किनभने जब हानबी श्री कनाइलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, मुगी नोटिस गर्छ र चाँडै उसलाई लैजान्छ। यो सरल कार्य कि मुगी तिनीहरूले पहिलो एपिसोडमा बनाएको सम्झौताको सबै अंश हो।
वास्तबमा, हानबी वास्तवमा एपिसोडको अन्त्यमा यसलाई मेरो/हाम्रो भनेर बुझाउँछ "Scums इच्छा" - जहाँ स्पष्ट रूपमा को नाम छ एनिमे बाट आउँछ। को वास्तविक कथा कुजु नो होन्काइ सबै तिनीहरूले गरेको सम्झौताको वरिपरि केन्द्रित छ, त्यसैले यो किन यो नाम हो भन्ने बुझिन्छ एनिमे.
मुगी र हनाबी एक अर्काको काखमा
जब हानबी बाटो देख्दछ मुगी मा हेर्छ अकाने उनले तुरुन्तै थाहा पाउँछिन् कि उनी, उनीहरूको स्कूलका अन्य केटाहरू जस्तै उनको प्रशंसक केटाहरू मध्ये एक हो। उनी उनीसँग सहानुभूति राख्छिन् किनभने उनी पनि श्री कानाईसँग प्रेममा छिन्। दुई बीचको भिन्नता न्यूनतम छ।
तिनीहरू दुवैले आफूलाई माया गरेको व्यक्ति पाउन सक्दैनन्, तिनीहरू दुवै एउटै उमेरका छन् र अन्तमा तिनीहरू दुवै विद्यार्थी हुन् जसले आफ्नो कामुकताको साथ प्रयोग गरिरहेका छन्। उनले यो साने एबटो नामक अर्को क्यारेक्टरसँग पनि गर्छिन् जसलाई तपाइँ तल देख्न सक्नुहुन्छ।
Kuzu No Honkai बाट Hanabi र Ebato
यो प्याक सुरु भएपछि, उनीहरूले यौन गतिविधिमा संलग्न हुने भेटघाटहरूको एक कोरिएको अनुक्रम सुरु गर्छन्। यो पनि हो जहाँ तिनीहरू एकअर्कासँग कुरा गर्छन् कि तिनीहरूले वास्तवमै कसलाई माया गर्छन्। यस अवधिमा तिनीहरू एक-अर्काप्रति सहानुभूति राख्छन्। तिनीहरूको सम्बन्धको अर्को कुरा यो हो कि तिनीहरूले अर्कोलाई कहिल्यै चोट पुर्याउने वाचा गर्छन्, र निस्सन्देह, यदि तिनीहरू एकसँग रहन सक्षम छन् भने अर्कोलाई एक्लै छोड्नुहोस्। साँच्चै माया.
हानाबी र मुगीको सम्बन्धको अपरंपरागत प्रकृति
त्यसैले यो सबै साँच्चै बनाउँछ हानबी र मुगी एक आदर्श एनिम जोडी? वा तिनीहरू कुनै पनि अन्य सामान्य एनिम जोडी जस्तै हुन्। मलाई लाग्छ कि फरक यो हो कि तिनीहरूको सम्बन्ध झूटमा आधारित छ।
यो नक्कली छ। यद्यपि, बिस्तारै बिस्तारै, तिनीहरू एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन्, र मलाई लाग्छ कि हानाबीले आफूलाई पहिले मन पराउँछिन् भन्ने महसुस गर्छिन्। मा एनिमे यो एक दुखद कथा हो।
मुगी र हानबी आफूले माया गरेको व्यक्तिलाई स्वीकार गर्न सहमत हुनुहोस् र त्यसपछि साँझ6बजे पार्कमा फिर्ता भेट्नुहोस् (भिन्न समय हुन सक्छ)। जब समय आउँछ, हानबी अवश्य पनि कानाई द्वारा अस्वीकार हुन्छ तर मुगी Akane को हेरफेर पुल मा फेरि चुसिन्छ। मुगी संग यौनसम्पर्क गर्छ अकाने र उसले कसरी उसलाई विश्वास गराउँछ कि उनी वास्तवमै उसलाई मन पराउँछिन्।
दुर्भाग्यवश मुगी, उनी साँचो होइनन् र ऊ आफ्नो पुरानो तरिकामा फर्कन्छ। प्रश्न यो हो: गर्यो हानबी म जस्तै यही निष्कर्षमा पुग्छु? के उसले त्यो अनुमान मात्र गरिन् मुगी संग यो गरेको थियो अकाने? वा उसले अरू केही सोचिरहेको थियो?
यदि तपाइँ अन्त्यको वरिपरि केहि स्पष्टता खोज्दै हुनुहुन्छ भने कुजु नो होन्काइ र हानाको र मुगी सम्बन्ध तब रिलिज मिति मा हाम्रो लेख पढ्नुहोस् Scums हार्दिक २ को शुभकामना.
Scums हार्दिक २ को शुभकामना
तपाईंले स्पिन अफ मंगाको विवरण दिने विस्तृत YouTube भिडियो पनि फेला पार्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ सम्भावित सिजन2मा रुचि राख्नुहुन्छ भने कृपया यसलाई हेर्नुहोस्, र पक्कै पनि, थप मा हानबी, अकाने, कानाई र मुगी.
Kuzu No Honkai मा Akane र Kanai को भूमिका
अकाने पक्कै पनि ठूलो भूमिका खेल्छ एनिमे र तिनीहरूको सम्बन्धमा। श्री कनाई पनि यसमा भूमिका खेल्छन् एनिमे, तर कतै जति नजिक छैन अकाने गर्छ। हामी उहाँबाट धेरै संवाद पनि पाउँदैनौं। अकाने अर्कोतर्फ खेल्नको लागि ठूलो भूमिका थियो किनभने उनले हेरफेर गर्न आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरिन् मुगी र श्रृंखलामा केही अन्य पुरुषहरू पनि।
म अक्सर यो बिना सोच्छु अकाने, हानबी र मुगी पक्कै पनि सँगै समाप्त हुन्थ्यो। स्पष्ट कारणहरूका लागि, यो सम्भव छ, र यसको अर्थ कानाईसँग हो, हुनसक्छ तिनीहरू भर्खरै भेटेका थिए र एकअर्कासँग बाहिर गएका थिए। त्यसैले, यदि मुगी र हानाबीलाई एक आदर्श जोडी मानिन्थ्यो जब तिनीहरूले वास्तवमा यसलाई नक्कल गरिरहेका थिए, के यसको मतलब तिनीहरू नभएको भए तिनीहरू वास्तवमै एकअर्काको लागि हुन्थे?
यदि श्री कनई र अकाने कुनै पनि प्रभाव थिएन, वा कम्तिमा 90% कम प्रभाव तिनीहरूले एनिममा गरेको भन्दा कम प्रभाव मलाई लाग्छ यसले दुवैलाई असर गर्नेछ। मुगी र हानबी धेरै रोचक हुनेछ। के तिनीहरू अझै पनि एकसाथ भेला हुनेछन् र तिनीहरू एनिममा भएको मानिने शक्ति जोडी बन्नेछन्? वा के तिनीहरूले एकअर्कालाई बेवास्ता गर्छन् र उनीहरूलाई अर्कोमा चासो नभएको रूपमा जारी राख्छन्?
हनाबी र मुगी चुम्बन कुजु नो होन्काई
यो हेर्न को लागी एक धेरै रोचक अवधारणा हो। तिनीहरू सँगै हुनुको कारणको सन्दर्भमा यो धेरै सत्य हो। याद गर्नुहोस्, तिनीहरू सँगै छैनन् किनभने तिनीहरू एकअर्कालाई माया गर्छन् र अर्कोप्रति आकर्षित हुन्छन्। यो किनभने तिनीहरू अरूलाई बहाना गर्न चाहन्छन् जुन तिनीहरू साँच्चैसँग हुन चाहन्छन्। त्यसोभए, अरूको आश्वासनको बदलामा, तिनीहरूले एक-अर्कालाई मद्दत गर्नेछन्, एक-अर्कालाई सान्त्वना दिनेछन्, र यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि अर्कोले आफूलाई माया गरेको बारे सोच्दैन।
के तिनीहरूले भविष्यमा एक आदर्श एनिम जोडी बनाउनेछन्?
यो धेरै बिग्रिएको सम्बन्ध हो। यद्यपि, किनभने तिनीहरू एकअर्कासँग इमानदार छन् र दुवै वास्तवमा एउटै कुरा चाहन्छन्, तिनीहरूसँग धेरै समान छन्। फरक यति मात्र हो भने मुगी or हानबी विपरित लिङ्गी थिए । त्यसको कारण मुगी र हानबी सँगै काम यति राम्रो छ कि तिनीहरू दुवै एकअर्काको रहस्य जान्दछन्। यो वास्तवमा के मा सम्झौता स्थापित छ।
हानाबी र मुगी ओछ्यानमा सँगै
If अकाने भर्खरै अस्वीकार गरेको थियो मुगी अनि उसलाई एक्लै छोड्न भने मुगी तोकिएको समयमा पार्कमा फर्किन्थ्यो। तिनीहरू दुवै सँगै फर्केका थिए, र सम्भवतः तिनीहरूले सुरु गरेको सम्बन्ध जारी राख्छन्। जे होस्, यसको सट्टा अब यो वास्तविक लागि हुनेछ, अब तिनीहरूले एक अर्कालाई राम्रोसँग प्रेम गर्न सक्थे।
यो पुन: हेर्दा धेरै स्पष्ट छ कुजु नो होन्काइ कि यो मामला छ। हानबी र मुगी एक आदर्श एनिम जोडी हुनेछ र तिनीहरूले सम्भवतः आफ्नो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनेछन्, र कलेज मार्फत सँगै हुर्कनेछन्। यो अन्त्य हो जुन धेरै मानिसहरू चाहन्छन्, तथापि, धेरै प्रशंसकहरू अझै पनि अन्त्यसँग खुसी छन्।
जब सम्म हामी मुगी र हनाबीलाई फेरि देख्दैनौं
हामी सबै माया गर्छौं मुगी र हानबी, र धेरै मानिसहरू तिनीहरूलाई फेरि सँगै हेर्न चाहन्थे। आशा छ, द स्पिन अफ मंगा अनुकूलित हुनेछ र हामी सबैले चाहेको अन्त्य प्राप्त गर्न सक्छौं। अहिलेको लागि हामीले पर्खनुपर्नेछ। यो लाजमर्दो कुरा हो हानबी र मुगी यस मार्फत गयो र कहिल्यै सँगै समाप्त भएन। पढ्नको लागि धन्यवाद, सुरक्षित रहनुहोस् र राम्रो दिन होस्।
तल तपाईंले हाम्रो इमेल प्रेषणमा साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईंले क्र्याडल भ्यूद्वारा पोस्ट गरिएको लेख कहिल्यै नछुटाउनुहोस्।
अघिल्लो प्रविष्टि कोमी Shoukou को हो - कोमी संचार गर्न सक्दैन
अर्को प्रविष्टि Kakegurui सिजन ३, रिलिज मिति, कहाँ हेर्ने + थप